Indraim-bava: ”Tsy navela hiasa an-kalalahana”, hono… | NewsMada
Indraim-bava: ”Tsy navela hiasa an-kalalahana”, hono…
Tsy navela hiasa an-kalalahana, hono, ny mpitondra nandritra izay fe-potoam-piasany izay. Marina ve izany? Na fohy fijery sy kely fitadidiana… Tsy lany andro tamin’ny fitadiavana fahamarinan-toerana politika sy fitoniana politika ve? Ratsy fiandohana tsinona fa tsy nanana fototra mazava niaingana.
Efa nahazo fahefam-panjakana vao nanangana antoko politika fa tsy niomana mialoha tsinona. Kisendrasendra ratsy sy noho ny fanakanana ny hafa tsy navela hirotsa-kofidina no nahatonga ny tena ho kandidà. Izay vao nitady ny maro anisa teny anivon’ny Antenimierampirenena.
Nalaza ratsy tamin’izany fitadiavana maro anisa izay ny fividianana olona hamadika palitao, ny kolikoly isaky ny mihetsika… Koa inona marina ity hoe nosakanana na tsy navela hiasa? Fanamarinan-tena amin’ny tsy fahombiazana, fanadiovan-tena amin’ny fomba fiasa tsy maharesy lahatra sy tsy mazava…
Tsy vitan’izany, nopotehina tamin’ny fampiasana herim-pamoretana avokoa izay nitady hihetsika sy nanelingelina rehetra: mpitarika sendikà, mpanao politika, tantsaha toy ny tany Soamahamanina, mpitarika mpianatra eny amin’ny oniversite… Koa iza na inona marina ny hoe sakana amin’ny asa?
Amin’izany, manginy fotsiny ny tsy fisian’ny lehiben’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena. Ho tapitra ihany ny fe-potoam-piasana parlemantera! Koa inona na iza marina no hoe sakanana sy tsy mamela hiasa? Ny herim-pamoretana eo an-tanana, ny famatsiam-bola lazaina fa azo…
Resaka tian-kateza hanamarinana sy hadiovana-tena ihany ity hoe nosakanana sy tsy navela hiasa? Tsy takona afenina ny fitavozavozana nifangaro voraka tamin’ny tsy fanarahan-dalàna efa ho lava, ny kitsapatsapa noho ny tsy fahatokisan-tena, ny tsy fahombiazana nahavery ny fahatokisan’ny vahoaka…
Mbola azo itokisana amin’izay lazainy sy ataony ve ny toy izany? Mihevi-tena ho lehibe tsy meloka, tsy mahadini-tena na mba miaiky ny fahadisoana… Raha mba mahadini-tena aza, mihevi-tena tsy misy mahavita ny vitany, hono, hatramin’izay. Eo ny vahoaka hitsara, fotoana izao: ny marina, marina ihany.